ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा कति माइल पर्खाल लगाउन सफल भए ?
सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा मुख्य एजेण्डा अमेरिकी सिमानामा पर्खाल लगाउनु रहेको थियो । झण्डै ४ बर्षको कार्यकालमा ट्रम्पले सिमाक्षेत्रमा कति माइल पर्खाल लगाउन सफल भए ? जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ ।
अमेरिका र मेक्सिकोको सिमा झण्डै २ हजार माइल लामो रहेको छ । ट्रम्पले कार्यकाल सम्हाल्नु अगाडि अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा ६५४ माइल तारबार लगाइएको थियो । जसमध्ये ३५४ माइल पैदलयात्रीलाई रोक्ने अवरोध थियो भने ३ सय माइल गाडी आउनबाट रोक्ने अवरोध थियो ।
ट्रम्पले कार्यकाल सम्हालेपछि ४ सय २ माइल पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने २१० माइल पर्खाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहको छ । डिसेम्बरभित्रमा ४५० माइल पर्खाल लगाइसक्ने योजना रहेको छ भने ट्रम्प ह्वाइटहाउसमा रहँदासम्म अर्थात् जनवरी २० सम्म पर्खाल लगाउने काम जारी रहनेछ ।
यद्यपी जो बाइडेनले कार्यकाल सम्हालेपछि एकइन्चपनि पर्खाल नथप्ने बताएका छन् । तर उनले ट्रम्प कार्यकालमा लगाइएको पर्खाल भने भत्काउने छैनन् । नयाँ प्रणाली अन्तरगत ट्रम्प प्रशासनले लगाएको पर्खालमा ३५० माइल पुरानै तारबार भएको स्थानमा पुनस्थापना वा दोश्रो पर्खाल लगाइएको हो ।
अहिले मेक्सिको र अमेरिकाको सिमाक्षेत्रमा पुरानो र नयाँ गरी झण्डै ७ सय माइल तारबार र पर्खाल रहेको छ । अर्थात् एकतिहाई भन्दा बढी सिमाक्षेत्रमा तारबार र पर्खाल लागिसकेको छ । अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र पूर्व निर्माणको अवस्थामा रहेको काम पूरा भएमा १ हजारमाइल अर्थात् झण्डै आधा सिमाना पर्खाल र तारबारयुक्त हुनेछ ।
ट्रम्पले कंक्रिटको पर्खाल लगाउनेबारे कुरा गरेपनि सिमानामा लगाइएको पर्खाल र बार स्टीलको हो । अहिलेसम्म लगाइएको बारपनि स्टीलकै रहेको छ । १८ देखि ३० फिटसम्मको यस्तो बार लगाइएको छ । जुन नाघेर आउन निकै मुस्किल हुनेछ भने बोर्डर एजेन्टले वारपार हेर्न सक्नेछन् ।